U-Hengxing uthathe inxaxheba kwi-53th CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
ngomphathi ku 20-08-10
Lo Mboniso ngowona mboniso mhle waseTshayina, ingqokelela yoomatshini, izinto zokupakisha, iimveliso zokhathalelo lomntu, iimveliso zobuhle bobuchwephesha, izithambiso, ukhathalelo lwempilo njalo njalo. Oomatshini beHengxing balungiswe ngononophelo, ngenqanaba lobuchwephesha, ukusebenza okuphezulu; uthotho lwee-ultras ...
Izizathu ezi-5 zokukhetha ukupakisha ityhubhu njengesiqulatho esifanelekileyo
ngomphathi ku 20-08-07
Kule mihla, ukupakisha okwahlukileyo kuye kwasetyenziswa kwizithambiso. Kwaye ukusetyenziswa kweetyhubhu zokucinezela kukhula kakhulu. Ukuthwala kunye nokuguquguquka kwenze ukuba ibe sisiqulatho esifanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Ngobuhlobo ukusebenzisa konke okufuneka ukwenze kukuvula isiciko kunye nokuthamba, ukuthobela ukukhulula ...
Izinto eziluncedo zokutywinwa kwe-ultrasonic
I-Ultrasonic lolunye uhlobo lomtshangatshangiso oomatshini, oqulathe inkqubo yonikezelo lwamandla kunye nenkqubo yentshukumo ye-ultrasonic. Ngumbane oguqula amandla oomatshini abasebenza rhoqo, amandla aphezulu, acinywe ngamandla okuqhuba. Kwaye kufaniswe iiparameter njenge ...